Kooxda Sao Paulo oo xaqiijisay in Real Madrid ay xiiseynayso mid ka mid ah xiddigaheeda – Gool FM
Haaruun May 5, 2020
(Sao Paulo) 05 Maajo 2020. Maamulaha guud ee Kooxda Sao Paulo ninka la yiraahdo Alexandre Passaro ayaa xaqiijiyey in Real Madrid ay xiiseynayso inay la saxiixato Igor Gomes.
21-sano jirkaan ayaa wacdaro ka dhigay kooxda koowaad ee Sao Paulo xilli ciyaareedkii hore, waxaana qaab ciyaareedkiisa uu soo jiitay indhaha kooxo badan oo ka dhisan qaaradda Yurub oo ay ku jiraan Real Madrid, Barcelona, ​​Sevilla iyo Ajax.
Passaro ayaa ku adkeystay inaysan jirin qaab rasmi ah oo loogu dhawaado xiddigan khadka dhexe ee wax weerara illaa iyo haatan, laakiin waxa uu xaqiijiyay in Real Madrid ay isha ku hayso xiddiga reer Brazil.
“Ma jirin hab rasmi ah oo ka yimid Real Madrid ama koox kale, waxa aan ognahay waa in Real Madrid ay garaneyso oo ay raacdo ugu jirto Igor, sida ay dhab ahaantii ula socdaan da’yar kale oo badan oo adduunka ah oo ay ku jirto kooxdeenna,” ayuu u sheegay Globo Esporte.
“Sidoo kale waxaa jira suurtogalnnimada ah in Igor uu helo baasaboorka Portugal lixda bilood ee soo socota, taasoo la micno ah inuusan ku qaadan doonin koox Yurub ka dhisan isagoo ah ciyaaryahan ajnabi ah, laakiin ma jiraan wax socda.”
Markii wax laga weydiiyay waxa ku saabsan xiriirka Real Madrid, Maamulaha guud ee Kooxda Sao Paulo waxa uu yiri: “Waa run, waxa aan dhihi karno waa [Igor Gomes] waa ciyaaryahan soo jiidanaya xiisaha kooxaha reer Yurub, laakiin ma jirin xiriir rasmi ah oo la la yeeshay.”
“Waa run inay qubanayaan xiisaha, waxaan horraanba la hadlay asxaabta reer Yurub ee faallooyin ka bixiyay, laakiin taasi waa sidaas.”
Real Madrid ayaa ku biirtay suuqa Brazil dhowr jeer xilli ciyaareedyadii ugu dambeeyay, iyagoo kala soo saxiixday xiddigaha reer Brazil sida; Vinicius Junior, Rodrygo iyo Reinier Jesus.
Cristiano Ronaldo oo Tallaabo weyn qaadaya isagoo bixinaya Mushaharka ciyaartoyda…